Mon, Jul 16, 2018 | 12:22:57 NST
10:55 AM ( 8 months ago )
फोहोर व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन । नयाँ बानेश्वर चोकमा बाटो पार गर्न कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यहाँ आकाशे पुुल बनाईदिए हुन्थ्यो । साँघुरा सडकहरुलाई फराकिलो बनाउन सके अझै राम्रो हुनेथियो । अनि हाम्रो टोलमा यो भुस्याहा कुकुरहरुको नियन्त्रण पनि हुन सकेको छैन् । राम्रो काम गर्छौं भनेर बोल्न त सबैले बोल्ने हो । तर बोले अनुसार काम पुर्‍याईदिए पो सबै खुशी हुनेथियौं ।
जन्मेको सोलुखुम्बुमा हो । बसाई सरेर उदयपुर गाईघाटमा गएको । तर काठमाडौंमा तरकारी बेचेर गुजारा चलाइएको छ । अहिले मंसिरमा पनि नेताहरुको चुनाव छ रे । हामीलाई यस्तै नगरी खान पाईंदैन । नेताहरुको कामदेखि के चित्त बुझ्नु, बुझेको छैन नि । के मा सन्तुष्टि छ र ? केहीमा नि छैन ।
कुर्सी नपाउँदासम्म कुकुर बिरालालाई पनि ढोग गर्दै हिँड्छन् । कुर्सीमा पुगेपछि मान्छे नै चिन्दैनन् नि । दुनियाँ गरीबलाई मारेकै छन्, रुवाएकै छन् । जितेपछि गरीबलाई लोप्पा खुवाएकै छन् । गरीबलाई पनि हेर्ने भए पो । जागिरमा पनि नेताहरुले आफ्नै मान्छे घुसाकै हुन्छन् ।
घर चाहिँ सर्लाही लालबन्दी भन्दा अलि माथि पर्छ । काठमाडौंमा ज्यामी काम गर्न कात्तिकमा आएको हुँ । हामीले त यस्तै गरेर गुजारा गरेका छौं । अहिले चुनावमा नेताहरुले भोट माग्दै त हिँडेका छन् ।
काम चाहिँ कुनैले गर्छन्, कुनैले गर्दैनन् । धेरैजसोले त भन्छन् मात्रै, काम गर्दैनन् । हाम्रो लागि चाहिँ पानी र बिजुली बत्तीको समस्या छ । त्यो अहिलेसम्म कसैले सुनेको छैन । हाम्रो ठूलो माग पनि केही छैन त्यति भए पुग्थ्यो । तर धेरै नेताले त भन्छन्, मात्रै के भन्नु खै ?
घर भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका हो । हाम्रो त्यहाँ दलित वस्ती छ, २०/२२ घर । हाम्रो लागि त्यहाँ बाटो छैन, गोरेटो बाटो नै हो । नेताहरुले काम पनि गरेका छैनन् । त्यति आउँदा नि आउँदैनन्, बजेट पनि दिँदैनन् ।
अहिलेको पाली बनाइदिन्छु भन्ने त निस्केको छ एउटा । तर चुनाव आएर होला, विश्वास त लागेको छैन । कसैले केही गर्दैनन् के । भूकम्पकै पैसा त अहिलेसम्म पाएको हैन, के आश गर्नु यस्ता नेताहरुबाट । भोट दिएर त केही पाईंदो रैनछ, उनीहरुकै मात्रै बनाउने हुन् ।